Plasma yaive nechikanganiso chekuchengetedza, asi KDE yakachimisa munguva pfupi | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rino, Chipiri chapfuura, mugadziri uye muongorori wezvekuchengetedza akaita chimwe chinhu chinowanzoshoropodzwa: tsvaga kusagadzikana uye ubudise iyo usati waudza mushambadzi weiyo software. Iyo yekuvandudza yaive Penner uye software maakawana iyo kuchengetedzwa kwekukanganisa yaive iyo Plasma graphical nharaunda kubva KDE Nharaunda. Kana iwe uchinetseka kuti sei tiri kutaura munguva yapfuura, tinozviita nekuti zvese zvakaitika nekukurumidza uye iyo KDE Nharaunda yatounza zvigamba zvinogadzirisa iyo bug.
Asi ngatiendei muzvikamu: dambudziko ndere kana kuti raive munzira KDesktopFile inofambisa iyo .desktop uye .directory mafaera. Penner akawana kuti .desktop uye .directory mafaera anogona kugadzirwa ine yakaipa code iyo inogona kushandiswa kumhanyisa iyo kodhi pakombuta yemunhu akabatwa. Iyo kodhi inoitwa pasina kusangana kwevashandisi, kunze kwekuvhura iyo KDE faira maneja kuti uwane iyo dhairekitori yatakachengeta iyo faira. Asi iyo KDE yakatotakura zvigamba haisiriyo yega nhau yakanaka.
1 Plasma kuchengetedza kukanganisa haina ngozi zvakanyanya
2 KDE Nharaunda yakatogadzirisa dambudziko
Plasma kuchengetedza kukanganisa haina ngozi zvakanyanya
ari Vanochengetedza vezvekuchengetedza vanoti izvo zvakawanikwa munguva pfupi yapfuura Plasma haina ngozi zvakanyanya. Kunyangwe ichikwanisa kukonzera kukuvara kwakakura, njodzi haisi iyo yainogona kuita, asi zviri nyore sei kukuvara. Kuti mumwe munhu aishandise, isu tinofanirwa kurodha pasi .desktop kana .directory faira, chimwe chinhu icho, nekuda kwekushomeka kwavo, zvisingaite. Muchokwadi, ivo kuti isu kuti tidaro ivo vanofanirwa kutinyengera tichishandisa social engineering.
Sezviri pachena Penner aida kuuya nechimwe chinhu "chinonakidza" pa defcon, musangano wezvekuchengetedza, uye haana kuudza KDE Nharaunda kuti iuye nenjodzi 0day yekuzvirumbidza nayo. KDE Nharaunda zvinehunhu yakashatisa chiito ichi, ichingotaura chete kuti vangadai vakatenda dai vakavaudza ivo kutanga kuitira kuti vashande pamwe chete pamhinduro.
KDE Nharaunda yakatogadzirisa dambudziko
Asi ivo havana kuida. Pasina kana zuva rimwe mushure mekukanganiswa kwePlasma yekuchengetedza, ivo vanga vatogadzira nekukanda chigamba kumatura avo. Sekunyora uku, Vashandisi ve KDE neon vanogona kuisa chigamba kubva kuDiscover, nepo vamwe vashandisi vePlasma vachizogona kuzviita munguva pfupi. Iwo maganhuro maviri miniseries ayo achaguma mumaawa mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Ivo vakawana kukanganisa kwekuchengeteka muPlasma, asi KDE yakagadzirisa mukubwaira kweziso
ShareDrop, yemahara "AirDrop" yekuchinjana mafaera kubva kubhurawuza